Tirada na soo booqday.	Maanta25677shalay45579Isbuucaan25677Isbuucii hore319617Bishaan782592Bishii hore985537Maalmaha oo dhan4600762Hadda Waxaa toos ugu jiraan: 355 guests, 3 members Your IP: 54.234.67.55 , Today: May 19, 2013	Deg Deg: Sarkaal Sare oo ka tirsanaa PS-ta oo uu dhalay Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo goordhoweyd lagu dilay Muqdisho
Written by Maamul on 17 September 2012. Waxaa goordhoweyd lagu toogtay magaalada Muqdisho gaar ahaan Xaafadda Buula Xuubeey ee degmada Wadajir Gabeyga Miiddo Waxaa tiriyay Wariye Cabdullaahi Soomaali (Akhriso+Dhageyso)
Written by Maamul on 16 September 2012. Markasta oo Muslimiintu culeys dareemaan fudeyd ayaa ku xigsada, waanaAlle Mahaddii, taasi waxa ay ka Yaa daran ineynnu dadka Kiristaanka ah ugu Hambalyeynno ciidahooda iyo in Ictisaam u Hambalyeeyaan Madaxweyne lagu Doortay inuu Dastuur ku Dhaqo Dad Muslim ah?
Written by Maamul on 16 September 2012. Ilaah baa mahad leh. Ammaan iyo naxariis Nabi Muxamed korkiisa ha ahaato:- Allaah wuxuu Qur'aanku ku Haweenay "Sacuudiyaan" ah oo gaajo daraadeed doonaysa in ay cunto Hilibka Dameerka (DAAWO VIDEO).
Written by Maamul on 16 September 2012. Marka aad maqashid dalka Sucuudiga waxaa isla markiiba maskaxdaada ku soo deg degaya in uu dalkaasi Maraykanka oo Ehaladii Dadkii ku Dhintay Weeraradii 11 September 2001, Udaabulaya Xabsiga Wayn ee Guwantanamo Bay.
Written by Maamul on 16 September 2012. Dowladda Maraykanka ayaa shalay oo sabti ahayd ilaa maanta oo Axad ah waxay ku daabulayaa Xabsiga wayn Mowd Lagu Wada Ballamay Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Dagaalka Jubbada Hoose.
Written by Maamul on 16 September 2012. Ciidamada muslimiinta ee ka dagaalamaya gudaha Somaaliya muhaajiriin iyo Ansaar waxay maanta galeen Dab Ka Kacay Suuqa Shidaalka Magaalada Kismaayo.
Written by Maamul on 16 September 2012. Dab khasaara dhaliyay ayaa ka kacay suuqa weyn ee magaalada Kismaayo xarunta wilaayada Islaamiga Jubbooyinka.
War deg deg ah: Dagaallo Cadawga Kenya Lagu Riiqay Oo Goordhaw Soo Gaba Gaboobay.
Written by Maamul on 16 September 2012. Dagaal culus ayaa goordhaw kusoo gaba gaboobay duleedka degmada Afmadoow ee gobolka Jubbada Hoose Saraakiil iyo Ciidan Lagu Dilay Dagaal Xalay Ka Dhacay Duleedka Muqdisho.
Written by Maamul on 16 September 2012. Faah faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo xalay siyaabo kala duwan uga dhacay Dagaallo Mar kale ka dhacay Ceelasha Biyaha
Written by Maamul on 16 September 2012. Xalay saqdii dhexe ayaa ciidanka Mujahidiinta waxay weerar culus ku qaadeen fariisimo Maleeshiyaadka Madaxa Maamulka dawladda Federaalka" wadahadal baan la galeynaa Al-Shabaab".
Written by Maamul on 16 September 2012. Inkastoo loolanka adag ee gudaha Soomaaliya ka oogan aaney waxba ka aheyn maamulka dabadhilifka ah ee Qarax AMISOM lagula eegtay magaalada Muqdisho.
Written by Maamul on 15 September 2012. Wararka ka imaanaya Degmada Yaaqshiid ee Magaalada Muqdisho ayaa sheegaan in qarax Miino lagula Faroole oo Muqdisho u imaanaya sidii uu Xasan Sheekh Maxamuud ugala hadli lahaa magacaabista Ra’iisul Wasaaraha Cusub.
Written by Maamul on 15 September 2012. Iyadoo ay masuuliyiin fara badan tartan iyo orod ugu jiraan sidii loo soo magacaabi lahaa Ra’iisul Wa
Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal culus oo xalay duleedka Muqdisho ku dhexmaray….
Written by Maamul on 15 September 2012. Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalo culus oo xalay Deegaanada duleedka magaalada Muqdisho Nin Muslim ah oo sheegtay in uu Al Qaacidda yahay oo khadka Taleefanka Ugu Hanjabay Shacabka Mareykanka.
Written by Maamul on 15 September 2012. Cabsi xoogan ayaa soo wajahday shacabka Mareykanka ee Nasaarada ah tan iyo markii ay muslimiinta Howlgal khaas ah oo xalay ka dhacay Jubbada Hoose (Xog-Wareed).
Written by Maamul on 15 September 2012. Faah faahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo xalay ka dhacay duleedka degmada Afmadoow Dhimasho iyo Dhaawac Ka Dhashay Qaraxyo ka dhacay Mandheera.
Written by Maamul on 15 September 2012. Qaraxyo khasaara dhaliyay ayaa maanta gudaha Kenya lagula eegtay saraakiil dhanka amniga qaabilsan Faroole Oo Kala Bedelaya Golaha Wasiirada Maamulkiisa.
Written by Maamul on 15 September 2012. Hogaamiyaha maamulka Puntland Cabdi Raxmaan Faroole ayaa ku dhaqaaqay isbedel dhanka golihiisa shaqada Ciidan Watay Gaari Dagaal iyo Hub Oo Dhanka Cadaado Ugoostay iyo Hubkii Mushrikiinta oo Rakhiis lagu Kala Iibsanayo (Warbixin).
Written by Maamul on 15 September 2012. Xilli ay burbureen kooxihii mushrikiinta ee Ahlusuna la magac baxay ayay beelo dega gobolka Galguduud DHAGEYSO: Barnaamijka Diiradda Jimcaha Idaacadda Alfurqaan.
Written by Maamul on 15 September 2012. Barnaamijka Diiradda Jimcaha waxaa maalintii shalay lagu falanqeeyay Madaxweynaha cusub ee dhawaan la Maleeshiyaadka Calool-uusta oo howlgallo Raaf ah ka fuliyey xaafado ka tirsan Degmada Afgooye.
Written by Maamul on 15 September 2012. Maleeshiyaadka Calool-uusta iyo kuwa shisheeyaha ayaa maalintii shalay ilaa xalay waxa ay howlgalo raaf Weerar xalay mar kale lagu qaaday Saldhiga Degmada Yaaqshiid ee Wilaayada Islaamiga gobolka Banaadir.
Written by Maamul on 15 September 2012. Ciidamada Mujaahidiinta Soomaaliya ayaa xalay weerar qorsheysan ku qaaday saldhiga Degmada Yaaqshiid Askar katirsan DKMG ah oo Muqdisho lagu dilay.
Written by Maamul on 15 September 2012. Xoogag hubaysan ayaa xalay magaalada Muqdisho ku dilay saddex katirsan maleeshiyaadka Calool-uusta Beesha Sade:Qofna kagama heybeysaneyno Difaaca diinta Islaamka (Dhageyso)
Written by Maamul on 14 September 2012. War Caawa ka soo baxay beesha sade ayaa waxay kaga hadleen xaaladaha dalka Somaliya gar ahaan isbadalada Start«81828384858687888990»End	Si Fudud ubaro Qur'aanka Adigoo Joogo Gurigaaga Online Riix Halkan